Psalmen 25 HTB - Nnwom 25 AKCB
1Awurade, me Nyankopɔn, wo mu na mede me werɛ hyɛ.
2Wo so, me Nyankopɔn, na mede me ho to,
mma mʼanim ngu ase,
na mma mʼatamfo nso nni me so nkonim.
3Wɔn a wɔde wɔn ho to wo so no mu biara
anim rengu ase da,
mmom, wɔn a wɔyɛ kɔntɔnkye kwa no
anim begu ase.
4Kyerɛ me wʼakwan, Awurade,
na minhu wʼatempɔn.
5Fa wo nokware no so kyerɛkyerɛ me,
efisɛ woyɛ Onyankopɔn, me Gyefo,
na mʼani da wo so daa nyinaa.
6Kae, Awurade, wo mmɔborɔhunu ne wo dɔ kɛse
a ɛwɔ hɔ fi tete no.
7Nkae me mmabun bere mu bɔne
ne mʼatuatew akwan;
kae me sɛnea wʼadɔe te,
Awurade, efisɛ wuye.
8Awurade ye na ɔteɛ;
enti ɔkyerɛkyerɛ nnebɔneyɛfo nʼakwan.
9Ɔde ahobrɛasefo fa ɔkwan pa so
na ɔkyerɛ wɔn nʼapɛde.
10Awurade akwan nyinaa yɛ ɔdɔ ne nokwaredi
ma wɔn a wodi nʼapam mu ahyɛde so.
11Awurade, me bɔne so de,
nanso wo din nti, fa kyɛ me.
12Enti hena ne onipa a osuro Awurade?
Ɔbɛkyerɛ no ɔkwan a wabɔ ama no.
13Obedi yiye wɔ ne nkwanna mu,
na nʼasefo afa asase no sɛ wɔn agyapade.
14Awurade da nʼatirimsɛm adi kyerɛ wɔn a wosuro no;
na ɔma wohu nʼapam.
15Mʼani da Awurade so daa,
efisɛ ɔno nko ara na obeyi mʼanan afi afiri mu.
16Dan wʼani hwɛ me, na dom me,
efisɛ meyɛ ankonam na meyɛ mmɔbɔ.
17Me koma mu dadwen adɔɔso;
yi me dadwen fi me so.
18Hwɛ me haw ne mʼahohiahia
na yi me bɔne nyinaa fi me so.
19Hwɛ sɛnea mʼatamfo adɔɔso
ne ɔtan kɛse a wɔde tan me!
20Bɔ me nkwa ho ban na gye me;
efisɛ me guankɔbea ne wo.
21Ma trenee ne nokware mmɔ me ho ban,
efisɛ mʼani da wo so.
22Gye Israel, Onyankopɔn,
fi wɔn haw nyinaa mu.
AKCB : Nnwom 25